မြင့်မားသောပါဝါ CO2 Glass ကိုလေဆာ Tube
တည်ငြိမ်မှု: အဆိုပါဥတုပြွန်ဂျာမနီမှတင်သွင်းဖန် frit ၏ လုပ်. , တပြင်လုံးကိုဖန်ပြွန်များ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ Power: အမေရိကန် hollyland စုစုပေါင်းကြေးမုံနှင့် output ကိုကြေးမုံအသုံးပြုကြသည်။ အမြင့်ဆုံးအာဏာကို 190 watts ကဖြစ်ပါသည်, နှင့် output power ကိုသိပ်သည်းဆမြင့်မားသည်။ ရှည်သောအသက်: ဓာတ်ကူပစ္စည်းနှင့်အတူ coated အဆိုပါဥတုပြွန်, ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကကုသသည့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနဲ့ပေါင်းစပ်, ရိနာစွဲပိုမိုတည်ငြိမ်စေသည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဘဝ 10000 နာရီအထိဖြစ်ပါတယ်။ အစက်အပြောက်: တည်ငြိမ်လိုင်ဖွဲ့စည်းပုံ, အာရုံစိုက်, st ...
တည်ငြိမ်မှု: အဆိုပါဥတုပြွန်ဂျာမနီမှတင်သွင်းဖန် frit ၏ လုပ်. , တပြင်လုံးကိုဖန်ပြွန်များ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
Power: အမေရိကန် hollyland စုစုပေါင်းကြေးမုံနှင့် output ကိုကြေးမုံအသုံးပြုကြသည်။ အမြင့်ဆုံးအာဏာကို 190 watts ကဖြစ်ပါသည်, နှင့် output power ကိုသိပ်သည်းဆမြင့်မားသည်။
ရှည်သောအသက်: ဓာတ်ကူပစ္စည်းနှင့်အတူ coated အဆိုပါဥတုပြွန်, ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကကုသသည့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနဲ့ပေါင်းစပ်, ရိနာစွဲပိုမိုတည်ငြိမ်စေသည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဘဝ 10000 နာရီအထိဖြစ်ပါတယ်။
အစက်အပြောက်: တည်ငြိမ်လိုင်ဖွဲ့စည်းပုံ, စုစည်း, တည်ငြိမ်, ကောင်းသောအရည်အသွေး, ယူနီဖောင်းအစက်အပြောက်ပုံစံနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်။
ဖြစ်စဉ်ကို: အဆိုပါထုတ်ကုန်ဂဟေလိုင်းလုံးဝထိရောက်စွာ High-ဖိအား Sparks တားဆီး, လုံးဝလေကြောင်းကာကှယျသည်ကြွေရေဂျာကင်အင်္ကျီအတွင်းတံဆိပ်ခတ်နေသည်။
အဆိုပါလေဆာရောင်ခြည်ပြွန်မှန်ရေအအေးကြွေရေဂျာကင်အင်္ကျီတိုးတက်ကောင်းမွန်လျက်, output ကိုမှန်ထိထိရောက်ရောက်မှန်ဘီလူးအပူချိန်လျော့နည်းစေခြင်းနှင့်အလွန်လေဆာရောင်ခြည်ပြွန်များ၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝရှည်သောရေအအေးစနစ်, ၏ကြေးနီရေဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်အတူလိုက်ဖက်သည်။
လျှပ်ကူးပစ္စည်းမျက်နှာပြင်, အထူးများတွင်လည်းကောင်း, --The လျှပ်ကူးပစ္စည်းမျက်နှာပြင်ကုသမှုလုံးဝထိထိရောက်ရောက်လေဆာရောင်ခြည်ပြွန်၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း, လျှပ်စစ်သံလိုက် sputtering နှင့်မှန်ဘီလူးညစ်ညမ်းမှုဖယ်ရှားပစ်ရန်အထူးသတ္တုချမှတ်။ တပ်ဦးနှင့်အဖုံး, အထူးယာဉ်အအေးနောက်ဘက်မှန်ဘီလူး! - တစ်စင်းအားဥတုလျှော့ချအပူ-ပျောက်ကွယ်သွားအဖုံးမျက်နှာပြင်ဓာတ်တိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်, High-ထိရောက်မှု insulator တွင်လည်းစွမ်းဆောင်ရည်။
ပုံစံ အရှည် (မီလီမီတာ) DIA (မီလီမီတာ) rated ပါဝါ (w) မက်စ်ပါဝါကို (W) လက်ရှိ (MA) Catalyst
B20 1250 ± 20 Φ60±280 95 28 ဟုတ်ကဲ့
B21 1250 ± 20 Φ80±280 95 28 ဟုတ်ကဲ့
B40 1450 ± 20 Φ60±2100 120 30 ဟုတ်ကဲ့
B41 1450 ± 20 Φ80±2100 120 30 ဟုတ်ကဲ့
B60 1650 ± 20 Φ60±2130 150 30 ဟုတ်ကဲ့
B61 1650 ± 20 Φ60±2130 150 30 ဟုတ်ကဲ့
CO2 လေဆာပြွန်က Character
ရေအအေး: 10 ℃ -40 ℃: သန့်ရေ, ရေအပူချိန်ကိုသုံးနိုင်သည်။
၎င်း operating ပတ်ဝန်းကျင်: အပူချိန် 2-40 ℃; စိုထိုင်းဆ 10-60% ။
လက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်: အများဆုံးအလုပ်လုပ်လက်ရှိ 32mA ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအပြေးလက်ရှိ 30mA အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထားရှိမည်ရမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ 28mA အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထားလျှင် tube ဘဝ 10000 နာရီကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာရေရှည်အဘို့ကိုကျော်မြင့်ကလက်ရှိအောက်မှာအလုပ်လုပ် tube.When အမ်မီတာလေဆာရောင်ခြည်၏အနုတ်လက္ခဏာလျှပ်ကူးပစ္စည်းချိတ်ဆက်ထားရပါမည်, အကအနုတ်တိုင်ခရမ်းရောင်ရလိမ့်မယ်, အသက်ရှင်ခြင်းလျှင်မြန်စွာတိုလိမ့်မည်။
insulator တွင်လည်းအိမ်မှသို့သွားရာမှမြေမှုန့်ကိုကာကွယ်ပေးရန်, ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်အတူကခြုံပေးပါ။
II ကို . အလုပ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှု
III ကို။ မှတ်စုများ
ထိုကဲ့သို့သော tampon ကဲ့သို့ပင် tools များနှင့်အတူထွက်ရှိမုဆိုးမမှန်ရဲ့အပြင်ပန်းမျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးမနေပါနဲ့, မဟုတ်ရင်က output ပါဝါအလေးအနက်ထားထိခိုက်နစ်နာကြလိမ့်မည်။ အောက်ပါပြတင်းပေါက်မှန်များအပြင်မျက်နှာပြင်အတွက်ညစ်ညမ်းမှု clean up လုပ်ဖို့သတ်မှတ်ထားသောလမ်းနေသောခေါင်းစဉ်:
မှန်သည်ညစ်ညူးအခါ 1), လေဆာကိုဖွင့်မပေးကြဘူး။
အဆိုပါအရက်အပြည့်အဝမတည်ငြိမ်သောရရှိသွားတဲ့ပြီးနောက် 4) လေဆာရောင်ခြည်ကိုဖွင့်မည်။
အထက်ပါနည်းလမ်းများထိထိရောက်ရောက်အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရငျ 5) ကအလယ်တန်းကနေအစွန်းမှမှန်မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးမှအရက်အတူ tampon ကိုအသုံးဖို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဘို့အမေးရန်လိုအပ်ပေသည်။ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းညစ်ညူးခံရခြင်းမှပြတင်းပေါက်တားဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အာရုံစူးစိုက်မှု: က acetone နှင့်အတူမှန်ဆေးကြောသန့်စင်ရန်တားမြစ်ထားသည်။
အဆိုပါလေဆာစက်အပြောက်စမ်းသပ်သောအခါဝေး output ကိုမှန်မှအ acrylic 300mm ထားပါ။
IV ။ လုံခွုံမှု
အဆိုပါလေဆာရောင်ခြည်မမြင်ရတဲ့အလင်းဖြစ်၏။ အဆိုပါလေဆာ debugging သည့်အခါအကာအကွယ်မျက်မှန်ဝတ်ဆင်ပေးပါ။ အဆိုပါအပြုသဘောတိုင်အမြင့်ဆုံးဗို့၌တည်ရှိ၏။ လုံခြုံရေးအမှတ်အသားများအာရုံစိုက်။
V. သိုလှောင်မှုနဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အရည်အေးသွန်းလောင်းနှင့်ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံပလပ်စတစ်အိတ်နှင့်အတူ output ကို terminal ကိုကိုဖုံးလွှမ်း။ အဆိုပါသိုလှောင်မှုပတ်ဝန်းကျင် 2-40 ℃ဖြစ်တယ်, တောင်းဆိုထားသောစိုထိုင်းဆ 10-60% ဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်း way.Important မှတ်စုထဲမှာရှိသကဲ့သို့အလေဆာထုပ်ပိုး: ကဒေါင်လိုက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်းလျှောပြွန်ကာကွယ်တားဆီးဖို့လေဆာရောင်ခြည်ပြွန်နှင့်အတူရေမြှုပ်ခိုင်မြဲရန်မေတ္တာရပ်ခံသည်။ output ကိုမှန်၏ဘေးထွက်အတွက်ရေမြှုပ်ကကျော်လွန်ပြီး 70 မီလီမီတာရှိရမည်ဖြစ်ပြီး, မှန်ရောင်ပြန်ဟပ်၏ဘေးထွက်အတွက်ရေမြှုပ် 50 မီလီမီတာကျယ်ပြန့်ဖြစ်ရပါမည်။
ယခင်: D4060 Laser Engraving machine
နောက်တစ်ခု: 100W Co2 Laser tube
Ies ဖိုင်မှတ်တမ်းအတူ Led ရေလွှမ်းမိုးအလင်း 1000w
1080p ကားဗီဒီယို Dash ကင်မရာ
1080p ပြင်းထန်သောအားကစားကင်မရာ HD
150w Cobra ဌာနမှူး Led လမ်းအလင်း
150w 50w လမ်းအလင်းများဦးဆောင်ပြီး
150w Led လမ်းမီး Ies ဖိုင်မှတ်တမ်း
2,45 LCD ဝိုင်ဖိုင်မော်တော်ကား DVR ကင်မရာ
260w Sharpy ဌာနမှူးအလင်း Moving
3d Lenticular Card ကို
3d Lenticular ရုပ်ပုံ
hd Mini ကို 3d Projector 1080p ဦးဆောင်ပြီး
ပူပြင်းတဲ့ကားက Black Box ကို
စိုထိုင်းဆထိန်းချုပ်ရေး Cd DVD သိုလှောင်ဝန်ကြီးအဖွဲ့
60w Led လမ်းမီးသည် Ies ဖိုင်မှတ်တမ်း
ဦးဆောင် 3d Projector
ဦးဆောင် Cast ကိုအလင်း
အလှအပအရေပြားများအတွက် LED flash အလင်း
Led အားကစားကွင်းဆင်း Lighting
Photocell အတူ Led လမ်း 60w
ရေစိုခံဖြစ်ရပ်မှန်နှင့်အတူ Mini ကို DV
Mini ကို Hidden Dash ကင်မရာ
LED flash ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာနှင့်အတူမိုဘိုင်းဖုန်းများ
အဆောက်အဦးအပြင် Lighting 400w
စက်မှတ်သားနေပါသည် Professional က Fiber လေဆာ
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Led လမ်းအလင်း
ခိုင်မာတဲ့ Pom အဘိဓါန်ရှေ့ပြေးပုံစံ
ufo Led အမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်အလင်း
ufo Led အမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်အလင်း 150w
ufo Led အမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်အလင်းအာရုံခံ 200w
wifi မော်တော်ကား Dash Cam
E-mail ကို: joneszhouyahui@163.com
ပစ္စည်း: အခြေခံအားဖြင့် CO2 လေဆာရောင်ခြည်ပြွန်ဖန် (ဥတုပြွန်အပါအဝင်) ပြွန်, မှန်, ရေ-c ပါတယ် ...
mirror.There အာရုံစိုက်လေဆာပြည်တွင်းနှင့်တင်သွင်းအာရုံစိုက်ကြေးမုံနှစ်မျိုးရှိပါသည်။ အဆိုပါ tra ...